ဆောင်းရာသီ 2015 TC200 ကူပွန်: $ 350 OFF + အခမဲ့သင်္ဘော! 12 / 22 / 15 သေးပါဘူးသက်တမ်းရှိ
Home » Bowflex » ဆောင်းရာသီ 2015 TC200 ကူပွန်: $ 350 OFF Plus အားအခမဲ့သင်္ဘောရယူပါ! 12 / 22 / 15 သေးပါဘူးသက်တမ်းရှိ
ဆောင်းရာသီ 2015 Treadclimber TC200 ကူပွန်
သာလီမိတက်အချိန်များအတွက် $ 350 OFF Plus အားအခမဲ့သင်္ဘော Get
Bowflex ထံမှကုန်အမှတ်တံဆိပ်သစ် Treadclimber TC350 အပေါ် $ 200 Save! ကူပွန် Code ကိုသုံးပါ HOLIDAYFIT ထွက်ရန်မှာ
ဤသည် Bowflex ကူပွန် 12 / 22 / 15 သေးပါဘူးသက်တမ်းရှိဖြစ်ပါသည် - ဒီ Bowflex Treadclimber အားလပ်ရက်ရောင်းရန်နောက်ထပ်အင်ဖိုများအတွက်အောက်တွင် Click
$ 350 OFF အဆိုပါ TC200 အပေါ် + အခမဲ့သင်္ဘော - သို့မဟုတ် - Bowflex.com မှာ TC275 အပေါ် $ 100 OFF & အခမဲ့သင်္ဘော! ကုဒ်: HOLIDAYFIT (12 / 22 အဆုံးသတ်)
အဆိုပါ Treadclimber TC200 အကြောင်း:
Bowflex အားဖြင့်အသစ်စက်စက် Treadclimber TC200 သင့်ရဲ့အဆစ်အပေါ်အနိမ့်သက်ရောက်မှုကြောင်းတစ်အထက်တန်းလွှာကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုကိုယလေ့ကျင့်ခန်းပေးပါသည်။ ဒါဟာတဦးတည်းအတွက်ပြေးစက်တစ်လှေကားထစ်တောင်တက်သမားအပေါင်းတို့နှင့်တစ်ခုဘဲဥပုံအဖြစ်ပြုမူတဲ့ထူးခြားတဲ့ 3-In-1 ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးတက်နှင့်ရွေ့လျားမှုဆင်းရွှေ့ကြောင်းခါးပတ်ရွေ့လျားအတူ2သီးခြား treadles ရှိပါတယ်။ ဒါကထူးခြားတဲ့ယလေ့ကျင့်ခန်းအတှေ့အကွုံကိုသင်2နှင့်တစ်နှစ်ခွဲကြိမ်မှတစ်ဦးရိုးရာပြေးစက်ယလေ့ကျင့်ခန်းထက်ပိုကယ်လိုရီတက်ရှို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ TC200 ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက်နောက်ဘက်စက်ခြေလှမ်းပလက်ဖောင်းရှိပြီး, နှင့်အလေးချိန်စွမ်းရည် 300 ပေါင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အိမ်ထောင်စုအတွက်မျိုးစုံကလူစက်ကိုအသုံးပြုနိုင်လျှင်အလွန်ကြီးစွာသောသော TC4 အပေါ်သုံးစွဲဖို့မရရှိနိုင် 200 profile များကိုရှိပါတယ်။ Bowflex တစ်ခုလုံးကိုစက်ပေါ်မှာ3တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်သူရဲ့အာမခံပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ TC200 ပုံမှန်အား $ 3,299 ရောင်းချပေးသော်လည်းသင်သာဒီဒီဇင်ဘာလ 2015 Bowflex Treadclimber TC200 ကူပွန်နှင့်အတူကန့်သတ်အချိန်များအတွက်ပိုက်ဆံကယျတငျနိုငျ
ဤသည်ဆောင်းရာသီ 2015 Treadclimber TC200 ကူပွန် 11 / 24 / 15-12 / 22 / 15 ထံမှသက်တမ်းရှိဖြစ်ပါသည်
နိုဝင်ဘာလ 23, 2015 FitnessRebates Bowflex, Treadclimber မှတ်ချက်မရှိ